Codeyn muujineysa in ay dhalashada 2-aad ka tanaasusho cidda xil sare ka qabaneysa Soomaaliya – Kalfadhi
Codeyn muujineysa in ay dhalashada 2-aad ka tanaasusho cidda xil sare ka qabaneysa Soomaaliya
Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod elektoroonik ah u qaaday in madaxda xilalka sarsare ka qabaneysa dalka ay ka tanaasulaan dhalashada 2-aad ee ay ka haystaan dalal kale, marka ay hogaanka dalka doonayaan in ay qabtaan, iyo in ay sii haysanayaan. Codeyntan, oo uu guddigu ku soo bandhigay boggiisa Feysbuugga, waxaa ka qeyb qaatay 6 kun iyo 6 boqol oo qof.
Xilalka sarsare ee dalka ee cidda qabaneysa la weydiinayo dadweynaha in, haddii ay haysato dhalasho dal kale, ay sharci noqoto in ay dhalashaas kale ka tanaasulaan iyo in kale waxaa lagu soo koobay Madaxweynaha, Reysal Wasaaraha iyo Guddoonka Baarlamaanka. 89% ka mid ah codeeyayaasha waxay qaateen iqtiyaarka ah in ay cidda xil ka mid ah xilalkaas qabaneysa ka tanaasusho dhalashada 2-aad ee ay haysato, halka 11% oo kaliya ay u codeysay in ay dhalashadeeda sii haysto.
Codeynta Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanka iyo Natiijadeeda
Sababta ay codeyntaan u sameeyeen ayuu Guddiga Dastuurka ee Baarlamaanku ku micneeyey in ay suurtagal tahay in ay u wanaagsan tahay sumcadda iyo shaqada loo haayo qaranka, ayna caawineyso xafidaadda sirta qaranka. Si ay guddigu marka ay arrintaas shaqadooda dib-u-eegista dastuurka ku darayaan ay go’aan fiican uga qaataan ayaa dhigaalkooda Feysbuugga lagu qoray in ay muhiim u tahay in ay dadweynuhu codkoodu ku muujiyaan codeynta ay sameeyeen.
Marka loo fiiriyo dadka ku xiran Feysbuugga guddiga, oo ah 37 kun oo qof, waxay dadka codeeyey, haddii ay yihiin tiradaas ku xiran oo kaliya, ay ka noqonayaan 18%. Hase ahaatee, waxa suuragal ah in ay ku jiraan codeeyayaal kale, maxaayeelaya 242 qof ayaa la sii waadgtay asxaabtooda. 464 faalo, oo ay codeeyayaashu ku kabayeen aragtidooda codeynta, ayaa sidoo kale laga dhiibtay 2-da iqtiyaar ee loo kala codeynayey.
Xubnaha Guddiga Dastuurka Baarlamaanka Soomaaliya
Guddiga Dastuurka Baarlamaanka Soomaaliya waxay horay ugu soo bandhigeen shacabka in ay, sidaas oo kale, ugu codeeyaan arrimo masiiri ah, oo ay doonayaan in ay u kaashadaan dib-u-eegista ay ku sameynayaan dastuurka, waxaana ka mid ahaa in ay kala doortaan:-
Xildhibaan sheegay in xitaa Shaqaalaha Madaxtooyada aysan qaadan mushaar 3 bil